လေအားလျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကို မည်သို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်နည်း။
admin မှ 22-03-26 ရက်နေ့တွင်
အဓိက အကြံပြုချက်- လေအားလျှပ်စစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လမ်းများနှင့် လမ်းကြောင်းများကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး ကြီးကြပ်မှုစနစ်ကို ထူထောင်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။လေအားလျှပ်စစ်ကွန်ရက် သတင်း- Long Island Wind Power သည် ရွှေ့ပြောင်းငှက်များဆီသို့ လမ်းကြောင်းပေးခဲ့သည်။လေအားလျှပ်စစ် တာဘိုင်များ ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ...
လေရဟတ်နည်းပညာဆိုင်ရာ အသွင်ပြောင်းစက်၏ လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပရောဂျက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
လေအားလျှပ်စစ်ကွန်ရက်သတင်းများ- မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လေအားလျှပ်စစ်စျေးနှုန်းများ ဆက်လက်ကျဆင်းခဲ့သည်။တစ်ခါတစ်ရံတွင် လေအားစိုက်ခင်းဟောင်းများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများသည် လေအားစိုက်ခင်းအသစ်များ တည်ဆောက်ခြင်းထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။လေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံအတွက် အဓိကနည်းပညာပြောင်းလဲမှုမှာ ယူနစ်များကို နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်...
1. စံပြယုံကြည်စိတ်ချရမှု တောင်ပိုင်းဒေသသည် မိုးရွာခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနှင့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး မိုးလေဝသဘေးအန္တရာယ်များသည် ပိုမိုပြင်းထန်သည်။ထို့အပြင် တောင်ကုန်းများ များပြားပြီး မြေအနေအထား ရှုပ်ထွေးကာ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကြီးမားသည်။ဤအကြောင်းပြချက်များသည် r.
လေတိုက်နှုန်းနည်းသော လေစွမ်းအင်အတွက် နည်းပညာပံ့ပိုးမှု
လက်ရှိတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လေတိုက်နှုန်းနိမ့်ခြင်း၏ တိကျသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိသေးဘဲ အဓိကအားဖြင့် 5.5m/s အောက်လေတိုက်နှုန်းကို low wind speed ဟုခေါ်သည်။CWP2018 တွင်၊ လေတိုက်ဘိုင်ပြခန်းများအားလုံးသည် လေတိုက်နှုန်းနည်းပါးသောဒေသများအတွက် နောက်ဆုံးထွက်လေတိုက်နှုန်းနိမ့်/အလွန်နိမ့်လေတိုက်နှုန်းမော်ဒယ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။အဓိကနည်းပညာက...
တောင်ပေါ်လေရဟတ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သော စွမ်းရည်ကို ခန့်မှန်းခြင်း။
လေအားလျှပ်စစ်ကွန်ရက် သတင်း- မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး နေရာအမျိုးမျိုးတွင် လေရဟတ်စိုက်ခင်းများ ပိုများလာပါသည်။အရင်းအမြစ်ညံ့ဖျင်းပြီး ဆောက်လုပ်ရေးခက်ခဲသော အချို့နေရာများတွင်ပင် လေတာဘိုင်များ ရှိသည်။ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ သဘာဝအတိုင်း ကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိပါလိမ့်မယ်...
သန့်စင်ထားသော ဆိုက်ရွေးချယ်မှုသည် လေတိုက်နှုန်းနည်းသော လေစွမ်းအင်ကို ဖြန့်ကျက်ရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။
လေအားလျှပ်စစ်ကွန်ရက် သတင်းများ- ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ လေစွမ်းအင် အရင်းအမြစ် ထောက်ပံ့မှုနှင့် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုအကြား ပြင်းထန်သော ကွဲလွဲမှုတစ်ခု ရှိနေပါသည်။မြောက်သုံးပိုင်းဒေသသည် လေစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ပေါကြွယ်ဝပြီး အမျိုးသားလေစွမ်းအင်အတွက် အဓိကကျသော နေရာများဖြစ်သည့် အကြီးစားလေအားလျှပ်စစ်စခန်းများစွာရှိသည်။
admin မှ 22-02-28 ရက်နေ့တွင်
အစောကြီးမှာ စာအုပ်တွေရှိပေမယ့် စာအုပ်စင်တော့ မရှိနိုင်ပါဘူး။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ လူသားများသည် ပုံသေနှင့် အဆင်ပြေသော စင်ပေါ်၌ စာအုပ်များကို ထားရှိကြလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်၊ အစောပိုင်း Warring States Shelves ကဲ့သို့သော ရိုးရှင်းသော ပရိဘောဂများသည် စာအုပ်စင်များ၏ ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။မင်မင်းဆက် ဒါပဲ...
Compact Shelving ကို ဆွဇ်ဇာလန် Hans Ingold မှ နှစ်ဆယ်ရာစုအစတွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပြီးနောက်၊ ထူထပ်သော စာအုပ်စင်များအသုံးပြုမှုသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် မတူညီသောပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်။တစ်ခုမှာ သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စာအုပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ်စင်များကို ပစ္စည်းအလိုက် သတ္တုစာအုပ်စင်များနှင့် သစ်သားစာအုပ်စင်များအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး သတ္တုစာအုပ်စင်များကို ကော်လံတစ်ခုတည်း၊ ကော်လံနှစ်ထပ်၊ အလွှာပေါင်းစုံ စာအုပ်စင်များ၊ ထူထပ်သော စာအုပ်စင်များနှင့် လျှောစာအုပ်စင်များအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။သစ်သားစာအုပ်စင် သစ်သားစာအုပ်စင်...
စာအုပ်စင်များကို နေရာများစွာတွင် တွေ့နိုင်သည်၊ အချို့မှာ အလှဆင်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်၊ အချို့မှာ စာအုပ်များကို ရှာဖွေကြည့်ရှုရန် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရုံးခန်း သို့မဟုတ် အိပ်ခန်းတွင် အိမ်၌ထားနိုင်သည်။အောက်ပါတို့သည် Qibing ၏အယ်ဒီတာမှ စာအုပ်စင်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ဝယ်ယူမှုစွမ်းရည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်သည်- bo...
အမျိုးမျိုးသောနေရာများတွင် လေနှင့် ဆိုလာ ပေါင်းစပ်လမ်းမီးများ/စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကား အဘယ်နည်း။
လူနေမှုဘ၀များ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသဖြင့် လူအများအပြား အိမ်ရာရွေးချယ်သောအခါတွင် အများစုမှာ မြို့တွင်းရှိ အသိုက်အဝန်းကို ရွေးချယ်ကြလိမ့်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စဉ်အတွင်း လူတို့၏ နေထိုင်မှုပုံစံအရ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို သိထားရမည်ဖြစ်သည်။ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ...
အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လေနှင့် နေရောင်ခြည် ပေါင်းစပ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၏ အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်များစွာကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်းတွင် အဘယ်အားသာချက်များရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။၎င်း၏ အားသာချက်များ ပိုများပါက၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တွင် များစွာ အထောက်အကူ ပြုမည်ဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ယနေ့ခေတ်တွင် လူများစွာသည် လေအားနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်းသည် အသုံးပြုမှုဖြစ်စဉ်တွင် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။တကယ်တော့,...
Wine Rack နှင့် Glass Holder, Plant Pot Hangers များ၊, သော့ချိတ် စီစဉ်သူ, Coat Hanger Rack ချိတ်များ, သတ္တုနံရံအနုပညာ, Necklace Holder Display,